Kirin 990: 5G ဖြင့်စွမ်းအားအရှိဆုံး processor သည်တရားဝင်ဖြစ်သည် Androidsis
Kirin 990: Huawei ၏စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
အက်ဒါဖာရီနို | | Huawei, IFA
Kirin 990 ကို IFA 2019 တွင်တရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်က Huawei က၎င်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည် သူတို့သည်ဘာလင်တွင်ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်တွင်သူတို့၏ processor အသစ်ကိုတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာသစ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းတင်ဆက်ပြသမည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ဖုန်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ခေါ်ဆိုထားသည်။ ဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလဟာလအတော်များများရှိပေမယ့်တရားဝင်ဖြစ်နေပြီ။
တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Kirin 990 ကိုတင်ပြပြီးပါပြီ။ ငါတို့တွေ့တယ် အမှတ်တံဆိပ်၏အာဏာအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာမတိုင်မီ အခုချိန်အထိ။ Plus အား, ယခုအပတ်ကောလာဟလအဖြစ်, ကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး Processor ကိုဖြစ်ပါတယ် 5G ဇာတိပေါင်းစည်းရှိသည်။
1 အားသာချက်အဖြစ် 5G နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေး
2 Kirin 990 ဝိသေသလက္ခဏာများ
3 Kirin 990 ကိုဘယ်တော့လွှတ်မှာလဲ။
အားသာချက်အဖြစ် 5G နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေး
ဒီပရိုဆက်ဆာသည်ဉာဏ်ရည်တုအတတ်ပညာအပြင်အခြားစွမ်းအားများထက်ပါ ၀ င်သည်။ Kirin 990 ၏တင်ဆက်မှုတွင် Huawei မျှဝေခဲ့သောအချက်အလက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းသည် Processor ကို 10.300 ဘီလီယံကို transistor ရှိပါတယ် အတွင်းပိုင်း။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ၎င်းသည်အမြန်နှုန်းကို ၂.၃ Gbps အထိမြန်နှုန်းနှင့် upload မြန်နှုန်း 2,3Gbps အထိရရှိနိုင်သည်။
Artificial Intelligence သည်ချစ်ပ်၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း, အဆိုပါ NPU တစ်ခုအသွင်အပြင်စေသည် အတူတူပါ။ ထို့အပြင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောတိုးတက်မှုများလည်းရှိခဲ့သည်ဟုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။ အတုထောက်လှမ်းရေး application များတွင်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာသည်စျေးကွက်ရှိအဓိကပြိုင်ဘက်များထက်သုံးဆပိုများသည်။ Huawei သည် Da Vinci အမည်ရှိ NPU ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Kirin 990 မှာတွေ့တဲ့ဒီ NPU ၎င်းသည်အလိုအပ်ဆုံးအတုထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပရိုဆက်ဆာကြီးတစ်ခုရှိခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းပရိုဆက်ဆာအပြင်ထပ်မံတုန့်ပြန်ထားသောအတုထောက်လှမ်းရေးပရိုဆက်ဆာရှိသည်။ ဒီဒုတိယပရိုဆက်ဆာကအားနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူလည်ပတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထူးခြားနေတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်က၎င်းသည်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သောအသစ်သောအသစ်သောအရာများအနက် Kirin 990 သည် 5G နှင့်ပေါင်းစပ်။ လာသည်။ ၎င်းသည်ပြင်ပ 5G modem ကိုအသုံးပြုသောလက်ရှိဖုန်းများမှပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ modem သည်သူ့ဟာသူပရိုဆက်ဆာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Processor ကိုခွင့်ပြုသည် 5G NSA ကွန်ယက်များနှင့် 5G SA ကွန်ရက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းသင်တန်း၏ 4G အပြင်။ ဤနည်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်ရရှိနိုင်သည့်ကွန်ယက်များကိုအချိန်တိုင်းသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။
ပရိုဆက်ဆာတွင်အသုံးပြုသော 5G modem သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။ မြန်တယ်၊ ငါတို့ရှာတွေ့တဲ့သူထက်ပိုမြန်တယ် ယခုအပတ်တွင် Samsung က Exynos 980 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်. စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်းရှိခြင်း၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 5G သည်ဖုန်းများတွင်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲမှုအတွက်ထူးခြားသည်၊ ဒီအထောက်အပံ့သို့မဟုတ် 5G နှင့်ပေါင်းစည်းမှုသည်ပရိုဆက်ဆာဗားရှင်းတစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။ Kirin 990 5G နှင့် 4G သာရှိသောဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးကတည်းက။ ထို့ကြောင့် high-end ပရိုဆက်ဆာနှစ်မျိုးရှိမည်ဟုကောလာဟလကိုအတည်ပြုခဲ့သည်.
Kirin 990 ဝိသေသလက္ခဏာများ
Huawei သည်၎င်းကိုမျှဝေသည် ဒီပရိုဆက်ဆာ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ သင့်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြည့်အဝ၌တည်၏။ ဒါကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်သလဲဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်သီတင်းပတ်များအတွင်းပေါက်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ဤဖြစ်ရပ်သည်ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလအချို့ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
လုပ်ကြံဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်:7nm + FinFet EUV
CPU ကို:2GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Cortex A76 cores + 2,86 Ghz တွင် Cortex A2 core + 76 Cortex A2,36 cores4Ghz
GPU ကို: မာလီ G76 16-core
Da Vinci ဗိသုကာအသစ်နှင့်အတူ NPU
ဆက်သွယ်မှု: ပရိုဆက်ဆာထဲသို့ထည့်သွင်း 5G modem
ဒေါင်းလုပ်လုပ်လုပ်ပါ၂.၃ Gbps မြန်နှုန်းနှင့် ၁.၂၅ Gbps အမြန်နှုန်းရယူနိုင်သည်
VoLTE ဖြင့် 4G ဖြင့် SIM ကဒ်နှစ်ခုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဓါတ်ပုံ: ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုတိုးတက်စေရန် ISP အသစ်
Kirin 990 ကိုဘယ်တော့လွှတ်မှာလဲ။
အတွင်းပိုင်း Kirin 990 ကိုအသုံးပြုသောပထမဆုံးဖုန်းများကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာမစောင့်ရပါ။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က Huawei Mate 30 ဟုကြေညာပြီးဖြစ်သည်, အဘယ်သူ၏တင်ပြချက်မြူးနစ်အတွက်စက်တင်ဘာလ 19 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့ပထမဆုံးဖုန်းတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဗားရှင်းကို 5G နှင့်သို့မဟုတ် 4G နှင့်သာမန်အသုံးပြုမှုရှိ၊
ဒီမော်ဒယ်တွေက Kirin 990 ကိုပဲသုံးမှာမဟုတ်ဘူး. အဆိုပါ Honor V30 ကိုလည်းအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်, လွန်ခဲ့တဲ့နာရီပေါင်းကောလာဟလများအဖြစ်, ယခုအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်သူထံမှတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုမရှိပေမယ့်။ ထို့အပြင်၊ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သူတို့တင်ပြသော high-end တွင်ဤပရိုဆက်ဆာလည်းရှိသည်။ သို့သော်အသေးစိတ်ကိုလများအတွင်းကြေညာလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Kirin 990: Huawei ၏စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်